Maqaallada Chris Benham ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Chris Benham
Chris wuu ogyahay in suuqgeyn weyn lagu abuuray dhageysiga macaamiishaada - adigoon kula hadlin. Waxa uu u adeegsaday fikirkan si uu uga caawiyo in uu kor u qaado dhawr shirkadood oo ay galaan jagooyinka hoggaaminta suuqa. Ku socodsiinta suuq-geynta Alchemer Waxay siisaa Chris fursad aan la soo koobi karin si uu u abuuro suuqgeyn ku habboon macaamiisha oo ku saleysan jawaab celintooda. Chris wuxuu ku biiray Alchemer ka dib markii uu qabtay doorarka suuqgeynta fulinta ee Symantec, Avast, Webroot, iyo Yellowfin BI. Isagu waa ka qalin jabiyay Jaamacadda Kansas.
Talaado, Agoosto 10, 2021 Jimco, Febraayo 11, 2022 Chris Benham
Uruurinta warcelinta macmiilka ayaa ah tillaabada ugu horreysa ee cad ee bixinta waaya -aragnimada macmiilka. Laakiin waa talaabada koowaad. Waxba lama dhammaystiro haddii jawaab -celintaasi ay waddo nooc ficil ah. Badanaa warcelin ayaa la uruuriyaa, oo la isku geeyaa keydka xogta jawaabaha, la falanqeeyo waqti ka dib, warbixinno ayaa la soo saaraa, ugu dambaynna waxaa la sameeyaa soo jeedin ku talinaysa isbeddello. Waqtigaas ka dib macaamiishii bixiyay jawaab -celinta waxay go'aamiyeen inaan waxba lagu qaban wax -soo -gelintooda oo ay sameeyeen